အောက်စီဂျင်ပြတ်တောက်ကာ သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ဦးလူမုန်းရဲ့အဖြစ်ကို မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဦးလူမုန်းရဲ့သမီးလေး (ရုပ်သံ) – Maythadin
အောက်စီဂျင်ပြတ်တောက်ကာ သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ဦးလူမုန်းရဲ့အဖြစ်ကို မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဦးလူမုန်းရဲ့သမီးလေး (ရုပ်သံ)
May Thadin | July 15, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီး ဦးလူမုန်း(ခ) ဦးအောင်ကိုလေးဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အပြင် တေးသီချင်းကောင်းလေးတွေလည်း ကိုယ်တိုင်ရေး ကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ဦးလူမုန်းဟာ တေးသံရှင်ဦးအောင်ကိုလတ်ရဲ့ညီအရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ(၁၄)ရက်နေ့မှာ ဦးလူမုန်းက ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့ချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး လောကကြီးကနေ အပီးအပိုင်ထွက်ခွါသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဦးလူမုန်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေကလည်းဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်း ဦးလူမုန်းကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းကို ဦးလူမုန်းရဲ့တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးကပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အဖေ့က သွေးတိုးလည်းရှိတယ် နှလုံးအမောဖောက်ပြီးဆုံးခဲ့ရတာပါ အဖေ့ရဲ့အသက်ကိုဘယ်လိုမှမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး အဖေကိုကောင်းရာမွန်ရာဘုံဘဝဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေချင်ပါတယ်” ဆိုပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဦးလူမုန်းကွယ်လွန်တဲ့အကြောင်းအရင်း အင်တာဗျူးဗီဒီယိုလေးကိုပရိတ်သတ်ကြီးအား အခုလိုပဲတစ်ဆင့်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ဖတ်ရူပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…ျပည္သူခ်စ္အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားႀကီး ဦးလူမုန္း(ခ) ဦးေအာင္ကိုေလးဟာဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္နဲ႕ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာကိုပီျပင္ပိုင္နိုင္စြာသ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္တဲ့အျပင္ ေတးသီခ်င္းေကာင္းေလးေတြလည္း ကိုယ္တိုင္ေရး ကိုယ္တိုင္သီဆိုခဲ့ပါေသးတယ္ေနာ္။ဦးလူမုန္းဟာ ေတးသံရွင္ဦးေအာင္ကိုလတ္ရဲ႕ညီအရင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဇူလိုင္လ(၁၄)ရက္ေန႕မွာ ဦးလူမုန္းက ခ်စ္ရတဲ့မိသားစုေတြနဲ႕ခ်စ္တဲ့ပရိတ္သတ္ကို ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေလာကႀကီးကေန အပီးအပိုင္ထြက္ခြါသြားခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ဦးလူမုန္းကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ ပရိတ္သတ္ေတြကလည္းဝမ္းနည္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.
ဒီကေန႕မွာဆိုရင္လည္း ဦးလူမုန္းကြယ္လြန္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို ဦးလူမုန္းရဲ႕တစ္ဦးတည္းေသာသမီးေလးကေျပာျပလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အေဖ့က ေသြးတိုးလည္းရွိတယ္ ႏွလုံးအေမာေဖာက္ၿပီးဆုံးခဲ့ရတာပါ အေဖ့ရဲ႕အသက္ကိုဘယ္လိုမွမကယ္လိုက္နိုင္ဘူး အေဖကိုေကာင္းရာမြန္ရာဘုံဘဝျဖစ္တဲ့ နိဗၺာန္ကိုေရာက္ေစခ်င္ပါတယ္” ဆိုၿပီးမ်က္ရည္ေတြနဲ႕ေျပာျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ဦးလူမုန္းကြယ္လြန္တဲ့အေၾကာင္းအရင္း အင္တာဗ်ဴးဗီဒီယိုေလးကိုပရိတ္သတ္ႀကီးအား အခုလိုပဲတစ္ဆင့္ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ဖတ္႐ူေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။